अत्याधुनिक प्रविधिको ५० एचपी एमएफडब्लुडी ट्रयाक्टर सार्वजनिक :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
अत्याधुनिक प्रविधिको ५० एचपी एमएफडब्लुडी ट्रयाक्टर सार्वजनिक
अमेरिकाको डियर एन्ड कम्पनीको सहायक कम्पनी जोन डियर इन्डिया प्रा.लि. (जेडिआइपिएल)ले नेपालमा नयाँ ट्याक्टर सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै नयाँ ५० एचपी चार पाङ्ग्रे ड्राइभ ट्याक्टर ५०५० एमएफडब्लुडी सार्वजनिक गरेको हो।
यो ट्याक्टरमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको विभिन्न विशेषता भएको हुनाले किसान समुदायको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत मिल्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ। नेपालको लागि यसको आधिकारिक वितरक विवेक अटोमोबाइल्स प्रा. लि हो।
उक्त समारोहमा जेडिआइपिएलका विक्री तथा मार्केटिङ निर्देशक सत्यन शाहले किसान उपभोक्ता तथा विवेक अटोमोबाइल्ससँगको लामो सहयात्रा एक ऐतिहासिक क्षण भएको बताए। त्यस्तै ट्याक्टरको विशेषता तथा उपभोक्ता मैत्री सेवाका कारण यसले नेपाली बजारमा सफलता हात पार्नेमा कम्पनी सकारात्मक छ।
जोन डियर आफ्नो उच्च उद्देश्य ‘वी रन सो लाइफ क्यान लिप फर्वार्ड’ नारासँगै संसारभरका किसान समुदायको लागि कृषी उत्पादकता र आय बढाउनका लागि प्राविधिक सेवाहरूको लागि प्रतिवद्ध छ। यसको नाराको अर्थ ‘जिन्दगी अघि बढाउन हामी चल्छौं’ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
जोन डियरले कृषी श्रृंखलाका विभिन्न समस्याको एककृत समाधान गर्दै विश्वको धेरै क्षेत्रमा कृषी पद्धतिहरूको आधुनिकिकरणमा नेतृत्व गर्दैछ। कम्पनी किसानहरूलाई कृषी उद्यमीमा रूपान्तरण गर्न सक्नेमा सकारात्मक छ।
डियर एन्ड कम्पनी संसारमै अत्याधुनिक प्रविधियुक्त वस्तु उत्पादन गर्ने तथा उपभोक्तालाई उत्कृष्ट सेवा दिने कम्पनीको रुपमा परिचित छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १२, २०७८, ०६:२३:५५